Dharka Indhoolayaasha ee loo yaqaan 'Roller Blind Fabrics' ayaa ah qaabka ugu weyn ee loogu talagalay ilaalinta qorraxda warshadaha hadda jira. Iyada oo faa'iido u ah hawlgal sahlan, fayadhowr, cimri dherer dheer iyo ku habboonaan kara meelo kala duwan. Sababo la xiriira baahida badan ee loo qabo badbaadinta tamarta iyo baa ...Akhri wax dheeraad ah »
Bandhiga Ganacsiga R + T World's Leading Trade for Furler Furitaanka, Albaabaha / Gates-yada iyo Nidaamka Kahortaga Qorraxda
ETEX waxay tagi doontaa R + T 2021 Stuttgart oo leh qol loo habeeyay si loo tuso macaamiisheenna qaabkii ugu dambeeyay iyo nashqadeynta hal abuurka ee dharka indha la '. Waxaa jira in kabadan 200 naqshad oo ah madmadow cusub oo loo qorsheeyay, translucent, jacquard, sunscreen, qalab shaqeynaya. ...Akhri wax dheeraad ah »
ETEX waxay diiradda saartaa naqshad indho sarreeya oo naqshadaynta dharka & waxsoosaarka. Tan iyo markii la aasaasay, waxaan ku dhisnay dhaqanka shirkadda tayo wanaagsan marka hore dhammaan howlaha maskaxda waxaanan u haynnaa saldhiggeenna nolosha. Si loo waafajiyo shuruudaha sare ee shuruudaha caalamiga ah ...Akhri wax dheeraad ah »